१३ फागुन, काठमाडौं । नेपाल एक वर्षपछि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भौतिक रुपमै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धनमा जाने भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार मार्च महिनामा भारतको दिल्ली र मुम्बईमा भौतिक रुपमै उपस्थित भई दक्षिण एसियालीस्तरको ट्राभल मार्टमा भाग लिने निश्चित भएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीका बीच अघिल्लो वर्षको चैतबाट विदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धनको कार्यक्रम रोकिएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनन्जय रेग्मीका अनुसार जुन मुलुकले पर्यटन प्रवर्द्धनका अभियान शुरु गरेका छन्, ती मुलुकमा अब भौतिक रुपमै उपस्थित भई प्रवर्द्धन अभियान प्रारम्भ गरिने भएको छ ।
यस दौरान नेपालले परम्परागत उत्पादनका साथै महामारीपछि पनि घुमफिरका लागि सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गरिने उनको भनाइ छ । दिल्ली र मुम्बईपछि सिलिगुडीमा समेत नेपालले भौतिक उपस्थितिमै प्रवर्द्धन गर्नेछ । यसरी हुने प्रवर्द्धनमा बोर्ड र निजी क्षेत्रका व्यवसायीले आफ्नो स्टल राखेरै नेपाल भ्रमणमा पर्यटकलाई आहृवान गर्छन् । यसबाहेक व्यवसायीबीच विजनेश डिल समेत यस मौकामा हुने गर्छ । यो वर्ष भारतीय शहर -दिल्ली, बैंकलौर, कोलकत्ता, मुम्बई, चेन्नाई, हैदरावादलगायत शहरमा प्रवर्द्धन गर्न बोर्डले १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
अहिले नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटन व्यवसायी नेपालमा आउन चाहने पर्यटकलाई सरकारले लगाएको कडा प्रावधान खुकुलो बनाउनु पर्ने अभियानमा छन् । मुलुकभित्र सरकारकै आहृवानमा हजारौं मानिसको भेला गर्दा सामाजिक दूरीको खिल्ली उडाएको तर पर्यटक आगमन रोकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
भारतपछि बंगलादेश र चीनमा समेत प्रवर्द्धनको योजना रहेको सीइओ डा. रेग्मीले बताए । यद्दपी चीनले भने आफ्ना नागरिकलाई घुमफिरमा सहज वातावरण बनाएको छैन । अब सम्भव भएसम्म भौतिक रुपमै उपस्थित भई नेपाल भ्रमणप्रति पर्यटकलाई उत्प्रेरित गर्ने योजना रहेको उनले बताए । लामो समयदेखि आगमन शून्यको अवस्थामा रहेको नेपाल पर्यटनले अर्थतन्त्रमा अप्रत्यक्ष ठूलो योगदान गरेको भन्दै यसलाई उकास्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
कोरोना भाइरसको दोस्रो प्रकृति देखा परेका मुलुकहरुमा भने तत्कालका लागि भौतिक रुपमै उपस्थितिको सम्भावना टरेको छ । बोर्डका सीइओ रेग्मीका अनुसार जर्मनीमा आयोजनामा हुने संसारको सबैभन्दा ठूलो ट्राभल मार्ट आइटीबी बर्लिन अनलाइनमा सिमित हुने भएको छ । स्पेनको अर्को ठूलो मार्ट समेत हुने-नहुने निश्चित छैन । नेपाल पर्यटन बोर्डको अगुवाईमा हरेक वर्ष तीन दर्जन भन्दा बढी ट्राभल मार्टमा भौतिक रुपमै उपस्थित भई प्रवर्द्धन हुने गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार ११:४१